🥇 ▷ Taleefoonada casriga ah ee ku jira baqshadan waxay u eg yihiin Samsung Galaxy Note 9, laakiin runti miyaa? (fiidiyow) ✅
Taleefoonada casriga ah ee ku jira baqshadan waxay u eg yihiin Samsung Galaxy Note 9, laakiin runti miyaa? (fiidiyow)
Samsung Galaxy Note 9 ee soo socda ayaa durbadiiba ku sawiray qaar ka mid ah sawirrada dhabta ah, laakiin maanta wuxuu xitaa doonayey inuu buunbuuniyo, isagoo isku muujinaya furid dharka ganacsiga. Waxa aad ka arki karto fiidiyowga dhamaadka maqaalka waxa ay u muuqataa, run ahaantii, ahaanshaha Ogeysiiska 9-aad u ifaya, oo laga soo qaaday xirmada iibka, oo sidoo kale ku jira alaabo kale.
Ereyga “waxa ay u muuqataaLooma adeegsan si kadis ah, maxaa yeelay sawirradu waxay ifafayaan shakiyo badan oo ku saabsandhab ahaanshaha aaladda muujisay. Qaar ka mid ah xubnaha jirka, iyo sidoo kale font loo adeegsaday qoraalka “Galaxy Note 9“, Uma muuqdaan sidii loo safeeyay oo kale sidaad ka filaysay qiime sare oo qaali ah, inta ka hartayna xirmooyinku sidoo kale waxay kor u qaadayaan sankooda.
Marka laga soo tago taleefannada casriga ah, waxaa jira koronto iyo qalab-adayaal noocyo kala duwan oo loogu talagalay dekedda UBS Nooca-C ee sanduuqa ku jira, sidoo kale waxaa jira dabool caag ah oo leh daah-furan, oo diyaar u ah helitaanka aaladda. Dhabarka xirmada ayaa la arki karaa Faahfaahinta farsamada, taasi waa xogta ah in toddobaadyo ay hadda ku soo noqnoqonaysay wararka xanta ah.
AKHRISO: Galaxy Note 9 lafteeda mar labaad bay muujisaa
Runtii kani miyuu noqon doonaa Galaxy Note 9-ka cusub mise, waxay u badan tahay, a Xaraashka Shiinaha? Iminka hadda ma hayno xaqiijin dheeraad ah oo arrintan la xiriirta, sidaa darteed waxaan kaaga tageynaa xukunka adiga oo u soojeediney fiidiyaha soo socda adiga.